Agreedo: Ny fanaovana fivoriana bebe kokoa | Martech Zone
Agreedo: Manao izay hahombiazan'ny fivoriana
Alahady Oktobra 9, 2011 Alahady Oktobra 9, 2011 Douglas Karr
Raha niasa tamina orinasa lozisialy lehibe aho dia nijanona tsy nandeha nivory intsony mba hitsapana. Ny ekipan'ny Product Management dia nivory nandritra ny herinandro ary indraindray 8 ora isan'andro… fihaonana tamin'ny mpanjifa, varotra, varotra, fampandrosoana ary fanohanana. Adala. Adala satria tia nihaona ny fikambanana nefa tsy nitazona ny mpiasan'izy ireo tompon 'andraikitra hanatanteraka na inona na inona amin'ny fivoriana.
Noho izany, nandritra ny 2 herinandro dia tsy nanatrika fivoriana iray aho. Ny olona izay nilaza fa tsy teo aho, ny mpiara-miasa sasany dia haneso na ho tezitra amin'izany… fa tamin'ny farany, ny lehibeko tamin'izany fotoana izany dia tsy niraharaha izany. Tsy niraharaha izy satria ny ahy nitombo tampoka ny famokarana. Ny olana dia ny fivoriana nampikatso ny fandaminana… ary nalemy aho. Nahoana? Raha tsorina, ny olona dia tsy nianatra mihitsy momba ny fotoana hanaovana fivoriana na ny fomba hanaovana fivoriana mahomby. Mampalahelo fa tsy zavatra ampianarin'izy ireo any amin'ny oniversite izany.
aho voasoratra momba ny fivoriana somary… izy ireo dia peeve ny biby fiompiko. Nanao fampisehoana mihitsy aza aho ny fivoriana dia tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny famokarana amerikanina. Izany koa dia antony iray hafa itiavako a Vokatra tontolo iainana miasa ihany. Raha tsy voaomana sy voalamina tsara ny fivoriana dia fandaniam-potoana lany andro fotsiny izany. Raha manana olona 5 ao amin'ny efitrano ao amin'ny orinasa iray ianao, dia 500 $ isan'ora ny fivorian'ny fivorianao. Hanana olona betsaka ve ianao raha mieritreritra an'izany?
Ankehitriny dia mety misy teknolojia afaka manampy ny fandaminanao. Manaiky dia lozisialy maimaimpoana ho fampiharana (SaaS) fampiharana ahafahanao miantoka ny fivorian'ny fivorianao araka ny tokony ho izy, mifantoka amin'ny valiny, miara-miasa ary indrindra indrindra - mamokatra.
Alohan'ny fivoriana: Manampy anao hamorona fandaharam-potoanan'ny fivoriana ny AgreeDo. Avelao ny mpandray anjara rehetra hiara-miasa amin'ny fandaharam-potoana alohan'ny fivoriana, amin'izay samy vonona ny rehetra.
Nandritra ny fivoriana: Na fivoriana mahazatra, na fifanakalozan-kevitra momba ny ad-hoc, dia makà minitra fivoriana alohan'ny fampiasana AgreeDo. Manampy anao hisambotra mora foana ireo olana lehibe rehetra toy ny asa, ny fanapahan-kevitra na ny naoty fotsiny.
Aorian'ny fivoriana: Alefaso ny minitra fivoriana ho an'ny mpanatrika rehetra ary hiaraha-miasa amin'ny valiny. AgreeDo dia manampy anao hanara-maso ireo lahasa ary handahatra fivoriana fanaraha-maso mora foana.
Ny interface an'ny Manaiky mifototra amin'ny valiny:
Ary azonao atao ny manamarina ireo lahasa fihaonanao amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny interface:
Raha mijaly ny orinasanao fivoriana ary mila fanampiana kely, manosika ny mpiasanao hampiasa AgreeDo mety hamadika ny orinasanao! Misoratra anarana amin'ny AgreeDo tsy andoavam-bola.
Tags: fahaketrahanafandriampahalemanafiarovanarefahamarinan-toeranaandalana foto-kevitra
Toerana ampiasain'ny olona ny finday finday avo lenta
Fahatakarana ireo mpampiasa iPhone